Glenariff Forest Hideaway
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJackie
I-Hideaway yindawo ephezulu yangoku, ezimeleyo ebekwe kwiigadi zabucala ezijongene neGlenariff Forest Park. Yeyona ndawo ifanelekileyo ukonwabela ukubaleka kwezothando, uphumle nosapho kunye nabahlobo, okanye uphume phandle, ukonwabela iimayile zokuhamba/iindlela zebhayisekile zentaba emnyango wakho. Kukho iindawo zokuhamba eziya kukwazi konke ukukwazi, iimbono eziphefumlayo ezijikeleze ikona nganye kwaye ukuhamba okumangalisayo kweengxangxasi zoMlambo iGlenariff kukuphosa ilitye kwiPaki yehlathi. Ufikelelo lwabahambi ngeenyawo lusimahla unyaka wonke.
I-Hideaway yindawo ephakamileyo ezimeleyo, eneplani evulekileyo yokuhlala / ikhitshi / indawo yokutyela, ilungele ukuphumla emva kwemisebenzi yosuku.
Ibhedi ye-kingsize ilala abantu abadala aba-2 ngokukhululekileyo kwigumbi lokulala eliphindwe kabini okanye indawo inokulala abantu abadala aba-2 kunye nabantwana abayi-2-3 / okanye ukuya kuthi ga kwi-4 yabantu abadala, besebenzisa igumbi lokulala kunye nesicwangciso esivulekileyo sokuhlala ngokudibeneyo. Kukho iibhedi ezimbini zesofa (1 x kabini, 1 x eyodwa) enebhedi ekhoyo yokusetwa kwindawo evulekileyo yokuhlala. Kukho iibhedi ezi-2 ezongezelelweyo zenkampu ezikhoyo, ukuba kuyimfuneko kwaye ezi zilungele abantwana. Zonke iingubo zelinen kunye neetawuli zikhona. Ibhedi yokuhamba kunye nelinen nazo ziyafumaneka xa ziceliwe kwaye kukho i-stairgate phezulu kwizitepsi ukugcina abantwana bekhuselekile.
Indawo yokuhlala ikhululekile kwaye iphumle ngokukhanya kwemood kunye ne-40 intshi ye-smart TV ene-Netflix channel efumaneka nge-wifi.
Ikhitshi lifakwe 4 ring hob, microwave oven, fridge, ketile kunye netoaster, izinto zokupheka, cutlery kunye tableware ukuya kwiindwendwe ezine. Kubonelelwa ngeti, ikofu kunye neswekile, ngokunjalo noluhlu lweziqholo, imifuno kunye neziqholo. Kukho ingobozi yesidlo sakusasa sakho kubandakanya i-cereal, amaqanda, ubisi, ibhotolo, ijem kunye neescones ezibhakiweyo zasekhaya.
Igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo lifakelwe ishawa yombane kwaye kukho uluhlu lwezindlu zangasese ezincedisayo ezisetyenziselwa undwendwe.
I-Hideaway inomnyango wayo wabucala, i-driveway, indawo yokupaka kunye nendawo yokuhlala yangaphandle ene-BBQ kunye ne-firepit eyenzelwe iindwendwe kuphela.
iisofa ezikwazibhedi eziyi-2, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2
5.0 · Izimvo eziyi-55
I-Glenariff Forest Hideaway ime kwindawo echongwe yibhodi yabakhenkethi yaseMantla yaseIreland njengendawo yoBubuhle beNdalo obuBalaseleyo. Yindawo enoxolo, yokuphumla yokuhlala kwaye abantu abasuka ngaphandle kommandla bayakonwabela ukuza apha ukuze bafumane indalo engqongileyo entle eneendawo ezahlukeneyo zokuhamba kunye neendledlana kunye neendawo ezibukekayo kunye nemibono. I-Hideaway yindlela emfutshane yokuqhuba ukusuka kwinani leelwandle eziluhlaza okwesibhakabhaka kunye nezinye izinto ezikhangayo zabakhenkethi ezenza kube yindawo egqibeleleyo ukonwabela ihlathi, intaba kunye nonxweme, konke kutyelelo olunye.
Umbuki zindwendwe ngu- Jackie
Siyathemba ukuba uyakukonwabela ukuhlala kwakho eHideaway kwaye siyavuya ukukunceda ngexesha lokuhlala kwakho, ukuba kukho nantoni na oyifunayo. I-Hideaway ikwizitiya zekhaya lethu, ngoko ke unokundibhalela okanye unkqonkqoze kumnyango wethu kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukunceda.
Iti, ikofu kunye nesidlo sakusasa secereal, isidudu kunye ne-scones yasekhaya enebhotolo kunye nejam zinikezelwa kwaye amaqanda asimahla ayafumaneka xa ecelwa. Nceda usazise ukuba iimpahla zakho kufuneka zizaliswe kwakhona ngexesha lokuhlala kwakho.
Siyathemba ukuba uyakukonwabela ukuhlala kwakho eHideaway kwaye siyavuya ukukunceda ngexesha lokuhlala kwakho, ukuba kukho nantoni na oyifunayo. I-Hideaway ikwizitiya zekhaya lethu…